အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စျေး China Manufacturers & Suppliers & Factory
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စျေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စျေး ထုတ်ကုန်များ)
ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်များ၏ 1. အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်း ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါလူနာဦးခေါင်းယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
ဆေးရုံဆရာဝန် Calling စနစ်အဘို့အစက်ရုံစျေး
ဆေးရုံဆရာဝန် Calling စနစ်အဘို့အစက်ရုံစျေး Eter ဆေးရုံသူနာပြု & လူနာ Talkback ကိုခေါ်ရန်ဘူတာ System ကိုဆရာဝန်တွေ, သူနာပြုများနှင့်လူနာများအကြားအင်အားကြီးဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းဖန်တီးမှုစကားသံကိုသတိပေးသစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းမသာဖြစ်သောဆေးရုံ digital ဆောက်လုပ်ရေး, သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးရန်,...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Zeolite Molecular ဆန်ခါအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုစျေး
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Zeolite Molecular ဆန်ခါအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုစျေး မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Zeolite Molecular ဆန်ခါအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုစျေးနှုန်းဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး,...
Panel ကိုအသုံးပြုခြင်းဆေးရုံအိပ်ရာခေါင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး Panel ကိုအသုံးပြုခြင်းဆေးရုံအိပ်ရာခေါင်း 1. အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်း ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံ Intercall သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်
ရောင်းမည်ဆေးရုံ Intercall သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံလူနာခေါ်ရန်သူနာပြုစနစ် ETR ဆေးရုံလူနာခေါ်ဆိုခသူနာပြုစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူက Wired ဆေးရုံသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူစက်ထုတ်လုပ် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ ဖျေါပွခကျြအဘို့အစက်ထုတ်လုပ် on-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့: အီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်နိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
အီး Approved PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ကုန်ကျစရိတ်
PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ကုန်ကျစရိတ် ဖျေါပွခကျြအဘို့အတွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်: စက်ပြုလုပ်ခြင်းအီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့နိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
Cylinder Refill သည် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် 1.Oxygen ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ Cylinder Refill အဘို့အ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Cylinder Refill သည် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 1.Oxygen ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ Cylinder Refill အဘို့အ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာပြုလုပ်ခြင်း PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာပြုလုပ်ခြင်း PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ ပစ္စည်းကိရိယာဖျေါပွခကျြ Making တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့: အီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပြုလုပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာနိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စျေး
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စက်ရုံ
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ်
အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု Facility စျေး
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စျေး အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility စက်ရုံ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်စျေး အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်ရုံ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု Facility စျေး